Tag: mmekọrịta ọha | Martech Zone
Tag: mmekọrịta ọha
Nzọụkwụ 10 maka Ijikwa Nkwukọrịta Nsogbu
Monday, September 21, 2020 Na Tọzdee, Septemba 22, 2020 Jenn Lisak Golding
Nwetụla nsogbu metụtara ụlọ ọrụ gị? Ọfọn, ọ bụghị naanị gị. Mkparịta ụka ọgba aghara nwere ike ịba ụba - site na nzaghachi oge maka ihe ị kwesịrị ịgwa ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ niile na-abata iji chọpụta ma ọ bụ ezigbo nsogbu. Ma n'etiti ọgba aghara, ọ dị mkpa mgbe niile inwe atụmatụ. Anyị na ndị na-akwado ndị na-elekọta anyị na-akwado ọrụ
Kedu Ajụjụ Ndị Achọrọ Aza iji Nyochaa Atụmatụ Inbound nke Companylọ Ọrụ Gị?
Wenezdee, Jenụwarị 29, 2020 Thursday, January 30, 2020 Douglas Karr
M na-arụ ọrụ na a atụmanya ugbu a na maara na ha chọrọ enyemaka ha dijitalụ ọnụnọ na inbound ahịa mgbalị… ma ha amaghị ebe na-amalite ma ọ bụ ụzọ dị mkpa iji nweta ebe ha mkpa. Ezie na edere m ọtụtụ gbasara agile ahịa njem iji zụlite azụmaahịa azụmaahịa gị, echeghị m na edere m banyere ihe ndị dị mkpa maka ịga nke ọma. Ka mụ na onye ahịa a na-arụkọ ọrụ, a na m agbaala ahịa, ahịa na
Awardzee: Otu esi achọta onyinye na ntanetị
Tọzdee, Machị 9, 2017 Tọzdee, Machị 16, 2017 Douglas Karr
Companieslọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-ele anya mgbe niile iji wulite ma mara ndị ahịa ha. Otu usoro di egwu bu inye onyinye. Onu ogugu nwere otutu uru karia ndi ahia gi: Onu ahia na enye ezigbo akwukwo nri nke ndi okacha amara ka ha tinye akuko. Ebe ntanetị na ihe ngosi na-abụkarị ndị na-ege ntị dị mkpa na-agakarị, na-eme ka ị nweta ohere. Ebe a na-enye onyinye na-ejikarị ndị ọka ikpe nwere mmetụta dị ukwuu, yabụ na-ebute akara gị n'ihu
Tọzdee, Ọktoba 6, 2016 Tọzdee, Ọktoba 6, 2016 Douglas Karr
Kpụrụ dị mkpa iji tụọ ịdị irè nke akụkụ ọ bụla nke ahịa ịntanetị, gụnyere mmekọrịta ọha na eze. N'okpuru ebe a bụ ụkpụrụ abụọ dị na ụlọ ọrụ ahụ, AMEC na PRSA). Onwe m, ekwenyere m na ndị ọkachamara PR kwesịkwara ịnakwere usoro nyocha nke ihe ọmụmụ, na-ejikọ ma ọnụnọ na mmekọrịta mmadụ na ibe n'otu olu nke olu gbasara ndị asọmpi ha. Iwu Nkwupụta nke mmekọrịta ọha na eze na Barcelona bụ nke e guzobere ụkpụrụ Barcelona
Thursday, August 18, 2016 Monday, August 22, 2016 Douglas Karr
SEO ụwa na-ama jijiji ntakịrị na akụkọ ahụ na Moz na-egbutu ndị ọrụ ya na ọkara. Ha na-ekwu na ha na-agbada site na iji nlebara anya na nchọta. Ha abụrụla ndị ọsụ ụzọ na ndị mmekọ dị mkpa na ụlọ ọrụ SEO ọtụtụ afọ ugbu a. Echiche m abụghị nchekwube maka ụlọ ọrụ Organic Search, ma ejighi m n'aka na ọ bụ ebe Moz kwesịrị ịbawanye ala. Ọ bụ ezie na Google na-aga n'ihu na-ewu ziri ezi na nsonaazụ ọma site na ọgụgụ isi
Lumanu: Chọta ndị na - emetụta ihe ma chọpụta Ọdịnaya Na - emetụta Ihe
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 14, 2016 Monday, August 15, 2016 Douglas Karr
Gbatị iru ọdịnaya gị dị oke mkpa. Ma ị na-anwa ime ka ogo gị dị elu site na ịme ka ọdịnaya gị mara ma jikọta ya na saịtị ndị nwere ikike dị elu, ma ị na-anwa ịgbasa mmekọrịta gị na ndị na-ege ntị dị mkpa, ma ọ bụ na ị na-anwa iwulite ikike na ụlọ ọrụ gị site na ịkpọ aha onye mmetụta someone influencer ahịa bụ ihe achọrọ. A na-ekewa ahịa ndị na-emetụta ihe n'ime ihe abụọ dị mkpa Ndị na-emetụta ya